Namni Lammaffaan Ripubilikii Dimookiraatawa Koongoo Keessatti Iboolaan Qabamee Argame Ni Du’e
Hagayya 01, 2019
Namni lammataa dhukkuba Iboolaan qabame argamuun har’a eega ifatti labsamee booda, du’uun isa immoo beeksisame. Namni kun kutaa Ituurii, hawaasa Baadiyyaa irraa ka gara magaalaa Goomaatti imale yoo tahu, achi dhaqqabuu isaa guyyoota xiqqoo dura Iboolaan qabamuun isaa beekamee, waaltaa wal’aansa Iboolaa ka magaalaa Goomaa jirutti wal’aanamaa ture.
Jaarmayaan Fayyaa Addunyaa, ka Tokkummaa Mootummotoaa, kutaalee Ripubilikii Dimookiraatawa Koongoo hookkarri itti hammaate – Kiivuu Kaabaa fi Ituurii keessatti dhukkubni Iboolaa argamuu labsanii, haalli isaa yaaddoo dhibee fayyaa hatattamaa sadarkaa Addunyaa tahee jira.
Lubni Waldaa Kiristaanaa tokko irratti dhukkubichi argamee, awutoobusiidhaan magaalaa Gommaa eega gahee booda du’uu isaa tu, labsii sana labsiisisiise.
Baatii Hagayyyaa, bara 2018 – eega Iboolaan biyyattii keessatti argamuun jalqaba beeksisamee booda namoota kuma lamaa fi dhibba shanii ol irratti dhukkubichi argame. Kanneen keessaa, namoonni kuma tokkoo fi dhibba ja’aa fi toorbaatama tahan ni du’an. Namoota dhukkubichi irratti argame kuma lamaa fi dhibba jahaa fi toorbaatamii tokko keessaa kanneen 700 tahan ijoollee tahuu – Jaarmayaan Gaargaarsa Daa’immanii, ka Tokkummaa Mootummootaa – UNICEF beeksisee jira. Caqasaa